“Kun Maloota Lafa keenya nyaatanii Lafasaaniitiin Waltti laaquuf Wixineeffatan Keessaa tokko. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Kun Maloota Lafa keenya nyaatanii Lafasaaniitiin Waltti laaquuf Wixineeffatan Keessaa tokko.
“Kun Maloota Lafa keenya nyaatanii Lafasaaniitiin Waltti laaquuf Wixineeffatan Keessaa tokko.
Amma Bataskaana Seeraan alaa gamatti sitti mul’atu kana Boolee naannoo Arraabsaa jedhamutti argama. Kana qofa miti bataskaanonni Seeraan ala Maqaa Amantaa dawoo godhachuun lafa babal’ifachuu nafxachaatiin karoorfatan keessaa hulaan baha Finfinnee naannoon kun isa tokko. Mana amantaa na barbaachisa jedhee kan gaafatu hawaasa amanticha hordofu ture. Amma dubbiin akkas hin fakkaatu hawaasnis Saalfateetuma waan callisaaa jiru fakkaata. Mandaruma tana qofa keessa gara bataskaanota Seeraan alaa lafti teenya ittiin weeraramte 22 oltu jira. Kanammoo akkam akka tahen beeknu qaamni mootummaas Osuma argu awanti raawwatamu raawwatama. Qeerroo Oromoo fi Hawaasa Oromootiin nu dhaqqabaan dhaamsa keenya.”
~from Qeerroo Boolee Arraabsaa.
Dhimmi saamicha lafaa diinonni Oromiyaa ‘caasaa BMNO’ waliin ta’anii saffisaan adeemsisaa jiran akkamiin akka raawwatamaa jiru Dr Milkeessaa Miidhagaa karaa BBC News Afaan Oromoo nuuf himee jira. Galata qaba. Akkuma namoonni hedduun irra deddeebi’anii ibsaa jiran mirgi ofiin of bulchuu Oromiyaa bara kamiin caalaa balaa jala seenee jira, gabaabumatti Oromiyaan ‘existential threat’ jala jirti.
Oromiyaa diiguuf karaa hedduutiin hojjetamaa jira. Garuu abbaan dhimma kanaa eenyu jennee of gaafannee deebii argachuu qabna. Yaadattu yoota’e manneen seeraan ala ijaaramaa jiran diiguuf hooggansa Obbo Lammaa jalatti BMNO jabaatee hojjechuu eegalee ture. Gaafa kun ta’u Abiy Ahmed gama tokkoon habashootaan waliigalee Obbo Lammaa irratti duula miidiyaa bane, gama biraatiin ilmaan Nafxanyaa OPDO keessa jirtu itti ijaaree caasaalee mootummaa fi paartii keessatti Obbo Lammaa irratti lola bane. Abiy itti mikaa’ee Obbo Lammaa fonqolcha mootummaatiin prezidaantummaa BMNO irraa kaase.
Gabaabumatti dhimmi guddoon Lammaan ittiin buqqaafame fedha inni ‘territorial integrity’ fi mirga ofiin of bulchuu Oromiyaa kanachiisuuf inni qabu dha. Amma Abiy nama Oromiyaan akka diigamtuuf haala mijeessu Itti-aanaa Prezidaantii jedhee muudee ofii dhoksaatti aangoo MM irratti dabalatee prezidaantii BMNO ta’ee hojjetaa jira. Caasaa BMNO caasaa Nafxanyootaa taasise, namni hundi kana osoo beekuu callisee ilaale. Namoonni seeraan ala lafa Oromoo saamanii mana ijaarrataa jiran naannoo Amaaraa irraa akka dhufaa jiran beekamaadha. Projektii jara qubachiisanii Oromiyaa malaan diiguu kan harkaa abu garuu Abiy Ahmed akka ta’e dagatamuu hinqabu.
Diinni Oromoo fi Oromiyaa aangoo mootummaa fayyadamee Oromiyaa diigumsaaf saaxilaa jiru Abiy Ahmed mataa isaati. Abiy aangoo irra osoo jiruu Oromiyaan nagaa argachuu hindandeessu, mirgi ofiin of bulchuu ishee kabajamuu hindanda’u. Osoo Abiy jiruu Oromiyaan ‘territorial integrity’ ofii kabachiifachuu hindandeessu. Diinummaa Abiy Oromoo fi Oromiyaa irraa qabu hamma nuti hubannu caalaa gadifagoodha. Oromoo fi Oromiyaan kan kabajaman, nagaas kan argatan gaafa gootummaadhaan Abiy Ahmed, Nafxanyaa maqaa isaaniin aangoo qabate ari’achuu danda’an qofa. Falli Oromoo Abiyyitti saree qalanii salphinaan ari’achuu irraa eegala. #Abiy_Must_Go
(Hunda dura Sirni ADWUI yakkaf cubbuu raawwataa turaniif sirnichimti murtee seraatti nuuf dhiyaachuu qaba!!!!!!
Siyaasa biyya keenyaa hubachuudhaaf siyaasa Addunyaa kalessaaf har’a gad fageenyaan hubachuun akkaan barbaachisaadha.Kolonessitoonnbiyyota dhihaaf baha addunyaa afrikaa #allattiidhaan (Dirct rule “)n jaarra hedduuf bitaa akka turanii seenaan ragaadha.Jarraawwan as aanaa kessattille tooftaa jijjiranii(indirect rule) #Al_kallattiin yeroo itti bitaa jirani kessa jirra.
Waan kana kessa galle ibsuu baannus karaaleen biyyoonni guddatan jedhamanu biyyoota hin guddatin akka afrikaa irratti dhiibbaa tasisan kessaa (national security) kan jedhanii.National security kana akka waan qara billaa lakkuu lama qabutti fudhachuun ni danda’ama.karaa tokkoon mirgoota, fedhii fi faayidaa woliigalaa biyya Tokko kan ilaallatudha.amaloota ofirraa ittisuus qaba.karaa biraatiin immoo gaaffi maqaa negeenyaatiin faayidaa worra ka’ani cunqursuu fi Addunyaa to’annoo ofii jala galchuuf hojii ofittummaa baay’ee kan gaggessuudha.Security bifa biyyootaAddunyaa ta’anno ofii jala galchuun bituu godhanii biyyotni hubatanis jiru.
kessattu biyyoonni qarqara dhiha addunyaaf Baha Addunyaa kessatti argaman waan isaan hin ilaallanne kessa seenanii gochi isaan raawwataniif yakki isaan dalagani kessatti Sera malessummaa gaafa ta’u “gocha diina biraa dhufe ofirraa tiisuuf jedhuun konbortaa gowwomsiitiin haqa jiru awwaaluun beekkamu.
Addunyaa kanarratti rakkoowwan uumamanii,gaaffiwwan mirgoota dhala namaa irra ejjatame ,addunyaa gartuu lamatti kan baase gaga’aminsi lubbuun qabeenya Sanyii Dhalaa namaa irratti raawwatame, hagana jedhame kan ibsamu miti.Kanaaf sababa kan ta’ani biyyoota guddatan jedhamanu kanadha.isaantu hordooftoota isaanitiif meshaa woraanaa deeggarsaa godhaa biyyaaf biyya ummataaf ummata wolitti busuun ofiif immoo jaarsa nageenya ta’anii mullachuu barbaadu.Cubbuun kan hojjetaman,mirgootni kan dhiitaman,lubbuwwan badan ,ibiddaa woraanaa bakka hundatti kan qabsiisani isaanuma kanadha.
Akka fakn amaerkaa ha fudhannu !
Akka Amnesty international gabaasetti Guatemala puppet kan motummaan Amarikaa karoora ajjechaa siyaasaf jecha basuun ummata 150,000 ajjesse jira.Amerikaan yeroo Hunda kan balleffattuun akka jecha /Chomsky jedhutti (Love to hate ) kannen akka gadaafi ,Iid amin ,Ayatullaa hominy ,Sadam Hussein, Fidal kaastoroo fakkatan kan jibbamaniif hacuccaa isaan ummata isaanirra gahaniini miti /qofa miti.Fedhiif kaayyoo,mul’ata ameerikaatiif waan guggufuu didani qofaf.
Harra amerikaan Addunyaa har’a kessa jirru kessatti FATHER Of JUSTICE taate mullachuu jallatti.seenaa kessttille ta’u ka’umsa hamma har’aatti mirga dhala namaa akka ajandaa isaanii ijoo godhatanii onnerrakabachiisanii hin beekanu.biyya barbaadani diiguuf mootumaa fedhani kasanii buusuufis gargarsa meshaaf dipolmacy kan godhaniif karoora dhuunfaa mataa isaaniti jedhanii male biyya sanaaf jedhanii akka hin taane gocha isaani kalessaa har’aatif seenaan ragadha.Sanyii dhala namaa dagugguu kessattille ta’u gocha Hiroshima fi Nagasaki magaalota Japan kessatti boonbii hydrogen fayyadamuun worra meshaa woraana omishatani duguggaa sanyii dhala namaatiin ebbasanii kan banani turani.Aangaa’otni lubbuuf nageenya dhala namaatif akka hin dinqine ifaan ifatti yeroo isaan hin dubbannef hin hojjenne hin jiru.
Addunyaa kanarratti dhala namaatiif nagaa kan kennuuf kan nagaa fuudhu isaan qofa akka ta’anitti of dhiyessaa lubbuuf qabeenya mirgaaf bilisummaa ummatota biyyoota sanyii dhala namaa hacuucaa dhufani itti jiru.
Biyyoonn gartuu addunyaa Kan Nagaa qabu Nagaa kan kennu,kan wolnyachifneef wolitti hin buusne ,kan woliif galchuudhaaf dirree haqaa osoo hin uumin ykn dirreen haqaa Akka Uumamuuf carraan osoo hin uumaminiif biyyoonni jirani hundi Sirnootaaf mootummootaaf Addunyaa worra guddatani gocha isaanii kana hubachuu qabu.worra cubbuu ulfaa’ani ,cubbuu dhalani ,yakkitoonni yakkitoota hunda caala dhiibbaa biyyota guddataniif sirnoota isaani hordofani akka ta’e hubachuu qabu.
Akkauma biyya keenyaatis kalessaa hanga har’aatti kan mirgoota namummaaf dimokraasi ummata bilisummaa ummata hacuucaa turani ,yakkaf gaga’ama lubbuun qabeenya ummatarran kan gahani sirnoota deeggarsa biyyota guddatani kana argatanii waan ta’aniif Hunda dura sirnoonni murteetti nuufa dhiyaatanu.
ADWUI sirnoota kana kessaa isa tokko.sirni ADWUI(Epdrf) Sirna kalessaf har’a haccucaaf cubbuu dalaga baheef itti jiru gaga’ama lubbuun qabeenya mirgoota namummaaf dimokraasi ummata biyyatti hacuucaa baheef itti jiru kanaaf Dursa yoo murteetti hin dhiyaanne _biyya kana kessatti wobiin bilisummaaf nageenyaaf mirgoota namummaaf dimokraasi ummataa jiraachuu/carran uumamuu hun jiraatu!kanuma!
by Anuwar Teha
Magaalaan Ghost town fakkaatu kun Wallaggaa Lixa magaalaa Ayiraatti komaandi postiin